Jikọọ na Group Whatsapp maka nyocha na Job na UAE
WhatsApp otu maka ọrụ na Dubai 🌟🌟🌟🌟🌟
Etu ị ga-esi chọta Ọrụ Nlekọta Mba Nile na Hotel Management UAE 🌟
Òtù WhatsApp maka ọrụ na Gulf, Dubai, Abu Dhabi na Qatar. Ọtụtụ ndị na-achọ ọrụ taa na-achọ ọrụ na UAE na WhatsApp Otu dị iche iche. Otú ọ dị, n'eziokwu, ọ bụghị mmadụ nile ga-enwe obi ụtọ. Iji arụ ọrụ na Dubai ma ọ bụ Abu Dhabi. Ka anyị chee na ihe karịrị 70% nke ndị na-achọ ọrụ na-agagharị site na mba ọzọ ruo Dubai.
Ọ bụghị ọrụ ọ bụla enyi na enyi maka ebumnuche ọrụ. Ọzọkwa n'elu ụlọ ọrụ ahụ. N'ikwu okwu n'ozuzu, enyela ọrụ ọrụ aka dị mma. Ya mere, ụlọ ọrụ anyị malitere ịrụ ọrụ n'ọtụtụ ọrụ. Na ebumnuche a, anyị amalitela ịmepụta iche iche iche iche. Ụlọ ọrụ Dubai City na-atụ anya mgbe niile inyere aka Malite ọhụrụ Job na Middle East!
Yabụ, ọ bụrụ na ị na-achọ ọrụ na UAE. Biko Sonyere ndị anyị ma ama WhatsApp Group ke Dubai. Anyị na na-echere ndị ọgbọ ọhụrụ mgbe niile. Ụfọdụ n'ime ndị na-ahụ maka ọrụ na UAE ụbọchị ndị a. Na-eziga ọrụ na agbasa ozi ngwa ngwa WhatsApp. Ya mere, ndi otu anyi emepụtara ndị na-achọta ọrụ na-achọ ọrụ na Dubai. Ya mere, egbula oge gị ma bulie ọrụ ọrụ gị. Ọzọkwa, ghọọ onye ọrụ obi ụtọ ọhụrụ na Dubai.
Dubai maka ndị ọgbọpụ niile na ịchọ ọrụ na United Arab Emirates.
Bụrụ onye na-achọ ọrụ nke mba ụwa
Ugbu a, anyị nwere ọtụtụ arịrịọ maka ndị na-achọ ọrụ nke mba ụwa. Biko bulite CV gị na ụlọ ọrụ anyị. Ya mere, anyị ga-enwe ohere iji gaa na profaịlụ gị. Anyị na-achọ Ndị na-achọ ọrụ na South Africa ga-achọ ịmalite ịrụ ọrụ na Dubai. Ya mere n'egbughị oge, biko kpọtụrụ anyị na ibe anyị WhatsApp ma ọ bụ site na email.
Jide n'aka na ị ga-eji ihe kachasị. E nwere ọtụtụ saịtị ọrụ ebe ị nwere ike biputere ya nweliteghachi gị. Gbalịa soro ha na ndị ọzọ na-ekwurịta okwu. Chọpụta otú ụlọ ọrụ na-akwụ ụgwọ na ebe. Ihe nile ga - enyere gị aka ịbanye n'ọrụ ọhụrụ na UAE.
Jikọọ na Njikọ Ịntanetị nke Anyị!
Ọrụ na Dubai maka ndị na-ekpo ọkụ n'ụdị dị iche iche
Maka ebumnuche nke ọrụ gbanwee mba ụwa Ọrụ Philipino achọ na UAE. Jikọọ na Whatsapp Òtù maka Ụlọ Ahịa, Mmanụ, na Gas, IT, Ahịa na N'ezie Marketing n'ime Dubai isi Ọrụ na ụlọ ọrụ akụrụngwa ọrụ na mmelite. Na akụkụ dị mma nke ọrụ mbanye ruo ugbu a na-enyere ndị ọzọ aka.
Anyị na-enwe ụfọdụ ndị ahịa ụwa, ha na-atụkwa anya na ha chọrọ were ndị na-arụ ọrụ na-arụsi ọrụ ike n'ụwa. Ị nwere ike ịgbanwe ọrụ gị ma nwee ike sonye anyị WhatsApp nbanye ozugbo.
Iji tinye ya ma ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ ugbu a site na ọkwa dị elu na ọkwa agadi maka ihe ọ bụla ọrụ ugbo ala na Dubai dị ka mmepụta, Nchịkwa mmadụ, nchịkwa, R & D, oke osimiri, ọdụ ụgbọ mmiri, ahịa na ahia, nchekwa. Ihe mbụ ị ga-echeta ebe a bụ naanị, biko kwuo ebe a na ọnụ ọgụgụ ekwentị gị iji sonye United Arab Emirates ụlọ ọrụ ọrụ ohere otu. N'ibum n'uche a, jiri ekwentị mkpanaka gị. Chọta ọrụ dị ịtụnanya na ụlọ ọrụ anyị. N'aka nke ọzọ, ndị na-achọ ọrụ ọhụrụ nwere ike sonye na ụlọ ọrụ mgbasa ozi mba. Ma ọ bụ ọbụna kpọtụrụ anyị na Mpaghara Dubai Dubai.
Ọrụ dị na Duba bụ oghe maka ndị na-ekpo ọkụ na 2018-2019. Ọzọkwa, ị nwere ike ịmalite ịchọ ọrụ Expo na 2020 na Dubai. Otú ọ dị, ịnwere ike ịchọta ụzọ dị iche iche ịmalite ọrụ na Dubai. Dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike bulitegharịa resume gị na ọtụtụ saịtị ọrụ na UAE. Na n'akụkụ aka nri nke nke a blog, ị nwere ike ịchọta ntụziaka dị mma ole na ole. Anyị na-enwe obi ụtọ karịa inyere gị aka na nyocha gị. Anyị na echere ngwa ọhụrụ ọ bụla. Biko biko zipụ CV gị na Dubai City Company.
Na-achọ ọrụ Emirates?
Na UAE, e nwere ọtụtụ ebe dị adị ebe ị nwere ike ịchọta ọrụ. Dịka ọmụmaatụ ndị na-achọ ọrụ n'ụwa. Na-atụ anya mgbe niile ịghọ ndị ọrụ akwụ ụgwọ. N'akụkụ aka nke ọzọ, ịchọta ọrụ na Dubai dịka onye ọpụpụ agaghị aghọ ihe dị mfe ime. Dịka eziokwu, ụlọ ọrụ anyị na-enyere ndị mmadụ aka inweta ohere ọrụ. Ihe mgbaru ọsọ anyị bụ isi maka onye ọ bụla na-achọ ọrụ ọ bụla bụ itinye ha. O doro anya na ị ga-akwụ ụgwọ ọrụ. N'eziokwu maka inweta ọrụ na Dubai na nleta, visa na-ewe oge. Ọfọn, site na ahụmahụ anyị nwetara gburugburu ọnwa 6.
Na United Arab Emirates, ọ dị mkpa ka ị mara ọtụtụ obere ihe ghọọ onye ọrụ. Otu n'ime ha na-achọta esi kwalite onwe gị ịchọta ọrụ na Dubai na Abu Dhabi. Ahịa onwe onye dị ezigbo mkpa. Karịsịa maka ọrụ a na-akwụ ụgwọ nke ọma. Ọ dị mkpa ka ị mara otú ị ga-esi abịakwute ndị ọrụ nchịkọta. Otu esi ejikwa ngwa ọrụ gị. Ma ọ bụ ọbụna otu esi eme nke ọma. Maka ịchọta ọrụ n'èzí, Ị ga-agụ ụfọdụ Atụmatụ banyere Dubai tupu ị gaa Dubai dịka onye na-achọ ọrụ.
N'akụkụ dị mma, ị ga-agụrụ ya nke ọma nduzi zuru oke maka ịkwaga Dubai maka ịchọ ọrụ. N'akụkụ ọjọọ, ọ dị mkpa ka ị nweta ọtụtụ akwụkwọ dị njikere tinyere akwụkwọ visa. Naanị mmeghe kasị njọ nke ga-ekwe omume mee gị. Ọ bụghị inweta ikike iji rụọ ọrụ na United Arab Emirates. Dịka ọmụmaatụ, na UAE, ịchọrọ ịnweta visa ọrụ. Site n'otu aka ahụ, enwere mmadụ ole na ole na-adịghị agbaso iwu. N'ikpeazụ, ha na-amachibido iwu na Emirates.
Na-arụ ọrụ ná mba ọzọ na Dubai na Education
Ọ dị mma, arụ ọrụ na Dubai bara uru ya? Azịza ya bụ Ee! Na 7 Emirates anyị nwere ebe dị mma mgbe niile iji zụlite nkà. Iji maa atụ, ịnwere ike ijikwa Ọmụmụ & Mahadum Ọrụ na Middle East. Ọmụmaatụ, Ibi na Gulf region na-eduzi enyere aka. Ọ bụghị iji kwuo na ọ bụrụ na afọ ole na ole, ị ga-enwe ọganihu nke ukwuu maka ọtụtụ ugwo ugwo. Mana iji nweta nke ahụ, ị ​​ga-enwe ezigbo ọzụzụ. Otu n'ime aka aka nwere ike ịbụ agụmakwụkwọ na Ph.D.
Mmụta na Dubai dị ezigbo mkpa. Enweghị ụzọ dị otú ahụ chọpụta ọrụ nlekọta na UAE karịsịa na MBA ụdị nkà a kwesịrị ịdịrịrị mfe. Ya mere, nyocha maka ọrụ karịsịa maka ọrụ na ọganihu na-abịa mgbe niile n'ụlọ akwụkwọ dị mma. N'ezie, ị nwere ike ịchọta ọrụ ụfọdụ dị mkpa iji malite. Ma ọ gaghị ezuru ya biri na Dubai na ọkwa dị mma. N'ezie, ụzọ dị mma bụ ịmechaa agụmakwụkwọ gị na obodo gị.
Ma mgbe ị na-agagharị na Dubai, dịka ọmụmaatụ, ịkụziri ọrụ ọrụ. Ha dị mma jikwa ndụ Arabic gị. Ọzọkwa, ọbụna na-enwe mmasị na Emirate agụmakwụkwọ ka elu. Biko chọpụta ntakịrị ihe gbasara ndụ na UAE. Ma otu ulo oru Dubai na-aru ihe i nwere ike ime na Dubai.
Ịbanye na Dubai Obodo na WhatsApp
Ịchọta ezigbo ụlọ ọrụ na Dubai. Ọ bụghị ihe dị mfe ime. Karịsịa top gosiri ọrụ ụlọ ọrụ. E nwere ọtụtụ ụzọ iji ruo ndị na-amụrụ ọrụ na Linkedin. Ị nwere ike ịkpọtụrụ ụlọ ọrụ na-ahụ maka ọrụ. Ọ bụ ezie na nke a nwere ike ịbụ eziokwu ka ụzọ kacha mma bụ ụzọ dị mma. Naanị iziputa CV maka ndị na-amụrụ ọrụ. Na-akpọ Ndị nnọchiteanya gọọmenti na Dubai. Ịjụ ndị enyi ka ha nyere gị aka. Ha nwere ike ịma ndị ụfọdụ. Mana ụzọ kachasị mma ụlọ ọrụ anyị na-adụkarị ndị na-achọ ọrụ. Na-agbaso usoro omume na jiri ndepụta ụlọ ọrụ na Dubai. Na-eziga ma na-ebugote nkọwa na weebụsaịtị iji mee ka bọl na-agba ọsọ. N'ikpeazụ, kwesịrị ịrụ ọrụ nke ọma.
Anyị na-adụkarị ndị na-achọ ọrụ, na-eji ịntanetị eji amamihe mee ihe. Ngwaọrụ a dị ịtụnanya na oge gị bara uru. Iji tinye ụzọ ọzọ, ị nwere ike gaa ọrụ portals na Dubai ma ọ bụ ọbụna nweta ndụmọdụ maka ndị ọkachamara na-arụ ọrụ. N'okpuru azụmahịa a, ka na-ahụ, ebe kachasị mma maka netwọk ọrụ maka LinkedIn. N'ebe ahụ ị nwere ike jikọọ aka na ndị ọrụ nchịkọta. Netwọk Linkedin na-aghọwanye ihe na-eto eto na Asia na Middle East. Ya mere dabere na ị ghaghị ịmepụta profaịlụ na-enweghị ntụpọ.
Job na-enyocha Dubai City Gburugburu
Jide n'aka na ị ga-amata otú ị ga-esi jidere ndị ọrụ nlekọta anya. Ọzọkwa, ọ bụghị naanị njikwa mmadụ ga-enyere gị aka ịbanye n'ọrụ. Na ileta ọtụtụ akwụkwọ ọrụ na ndụmọdụ maka ọrụ na Dubai. Ị maghị n'eziokwu site na ebe isi akwụkwọ ozi gị na-abịa n'ọnụ ụzọ gị. Ị ga-atụlekwa WhatsApp otu na nyocha ọrụ gị.
Echefula inwe nkọwa zuru ezu ozi banyere obodo Dubai City. Ụfọdụ n'ime ha nwere ike ịchọrọ gị ma ọ bụrụ na ị na-achọ ịghọ onye ọpụpụ. Dubai City bụ ebe kachasị mma maka ndị na-ere ahịa. Ugbu a enwere ohere buru ibu ma ọ bụrụ na ị bụ nwanyị na-etinye ego.
Ụzọ ọhụrụ ịchọta ọrụ na mba GCC
Ndụmọdụ ọzọ dị mma na nke amamihe dị na ya bụ ijikọ n'ịntanetị. Ikwu okwu na ndị na-azụ ọrụ na ụlọ ọrụ na-ahụ maka India na Mumbai. Ulo oru na mba GCC na Booming. N'ebe dị mma, na ọrụ anyị, ị nwere ohere ịchọta ọrụ WhatsApp na Middle East. Ya mere, ọ bara ezigbo uru iji oge ole na ole nọrọ soro ndị ọzọ na-ekwurịta okwu. Ndị ụlọ ọrụ anyị na-aghọ ngwa ngwa nke ndị otu ụlọ ọrụ na Emirates.
Ihe ka ọtụtụ n'ime ndị na-achọ ọrụ anyị na onye ọrụ ọhụụ ọhụrụ hụrụ otu n'ime anyị WhatsApp Group nke anyị na-eke kwa ụbọchị. Enwere otutu na-enwe mmetụta mgbe ndị ọbịa anyị jiri otu ndi otu di iche iche choro ichota ebe ndi oru Dubai. Anyị na-ahụ n'anya ma na-anabata ndị ọrụ ekwentị ọhụụ ọhụrụ.
Ụzọ kasị sie ike ịchọta ọrụ ọhụrụ na Dubai. Na-etinye aka na ụlọ ọrụ na-ahụ maka ụlọ ọrụ. N'ihi nke a, ụlọ ọrụ anyị kere ụlọ ọrụ dị elu ịrụ ọrụ na Dubai. Ị nwere ike ịhụ onye na-akwụ ụgwọ na Dubai. Na onye bụ kacha mma n'ahịa? Maka na ọ bụrụ na ịchọrọ ịrụ ọrụ na Middle East. Ikwesịrị ịmalite ịmepụta ntakịrị ihe gbasara usoro PR maka atụmatụ maka ụgwọ ọrụ.
Gịnị mere o ji baa uru ka ọ malite ịrụ ọrụ na GCC?
Dịka ọmụmaatụ, ụzọ dị mma isi nwee ọrụ pụrụ iche na nke a ma ama. Na ihe bụ ndị ọkachamara a ma ama?. N'ezie, 7 malitere Dubai Hotels. Ya mere, ọ ga-aka mma ịga malite ịrụ ọrụ n'ụlọ ọrụ nkwari akụ na Dubai. A maara ọbịa ọbịa nke Arab na mba GCC. Ya mere, n'ikpeazụ, ị kwesịrị ịmalite iche echiche banyere ụdị ọrụ a. Gịnị mere Dubai ji dị ịtụnanya? Na otu n'ime ihe kacha mma etinye na GCC ?. N'ihi na ọ bụ otu n'ime ebe kasị dịrị nchebe n'ụwa na 0% ọnụego mpụ. Ya mere dị ka anyị na-enye gị ndụmọdụ banyere ụdị ọrụ. Lelee otú i nwere ike ghọọ Uber ọkwọ ụgbọala na Dubai. Ọzọkwa, lelee ya na ndị ọzọ na ibe anyị WhatsApp. Ha nwere ike inyere gị aka ịchọta ọbụna nhọrọ ndị ọzọ ị ga-ahụ na Dubai.
Otu n'ime ọrụ kachasị mma na Middle East bụ ahịa?
N'aka nke ọzọ, ị kwagara UAE. Karịsịa ịchọta ọrụ ka mma. Nke kacha mma ọrụ na Middle East ị nwere ike ịchọta na Marketing. Enwere ihe igwe 50,000 ohuru ohuru ohuru nke ndi ozo banyere okwu a. Ya mere, ọ ga-adị mma ịchọpụta obere ntakịrị. Iji laghachi azụ ọrụ kachasị mma. Anyị na ịkụ nzọ maka ọrụ ahịa. A mara ụdị ọrụ a. Nke a bụ nhọrọ kachasị mma n'etiti ndị ọpụpụ sitere na ndị ọrụ Asia ndị na-achọ ịkwaga Dubai. Kedu onye na-azaghị ekwentị site na nwa okorobịa si India? Ndị na-agbalị ire ngwaahịa ndị mepụtara na ekwentị ?. Ee, nke a bụ otu ahịa n'ahịa na Bollywood.
Na omume azụmahịa GCC na-eto eto oku na-eto eto. Nke ahụ bụ otu ụzọ kachasị mfe ịchọta ọrụ. Karịsịa ma ọ bụrụ na ị bụ site na India na ịchọ ohere ọrụ na UAE. Nke a bụ ụzọ. Ị nwekwara ike ịchọta ndị ọzọ ndị nwere ike inyere gị aka. Dịka ọmụmaatụ, enwere ọtụtụ ezi ohere na Middle East. Ka ị ghara ọbụna ịma. Ihe niile ị ga - eme bụ naanị ịgwa ndị ọzọ okwu.
Kedu otu esi ahọpụta ezigbo ụlọ ọrụ Dubai ka ha rụọ ọrụ?
N'ebe a na ị nwere ike ịgụ banyere nke ahụ. Ma naanị otu ụzọ chọpụta ma ụlọ ọrụ ahụ kwesịrị oge gị. N'ikwu okwu n'ozuzu, bụ ịmalite ịrụ ọrụ n'ime. Ụzọ dị mma ị ga-esi eme ya bụ ịga maka 1 ụbọchị na-ejegharị na nyochaa na Dubai. Na-esote afọ Google google. Owụtwo na ụdị ajụjụ a na-eto eto kwa ụbọchị. Dịka ọmụmaatụ, anyị nyocha ụlọ ọrụ maka ọrụ na 2018, anyi na echere ndi ozo ohuru mgbe nile. Ụzọ kacha mma ịchọta Ụlọ ọrụ kacha mma 15 ga-arụ ọrụ na UAE. A sị ka e kwuwe, ị ga-enwe ihe ọmụma nwere ike ịkọ gị. Ọzọkwa ụgwọ ọrụ ị ga-atụ anya.
Ụlọ ọrụ ndị isi ị kwesịrị ịnwale ịbanye. Ndi ụlọ ọrụ na-ebili ma na-enwu gbaa na Dubai City. Dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike ịchọta n'Ịntanet. Na enyemaka enyo na nyocha oru ị nwere ike ịchọta ụlọ ọrụ Dubai City Company. Ụlọ ọrụ Dubai City mgbe niile enyere ndị na-achọ ọrụ aka ịchọta ọrụ. Anyị na-agbalị mgbe nile ịkwali onye ọ bụla na-achọ ọrụ. Anyị na-etinye ikike nchịkwa maka nyocha banyere nyocha ọrụ na Dubai. Ọzọkwa ka ịtụkwasị ihe ederede na mgbasa ozi mgbasaozi na ndị anyị na WhatsApp. Anyị na-ede gịnị mere o ji baa uru iji malite ọrụ ọrụ na Dubai. Na ọtụtụ ozi ndị ọzọ nwere ike inyere gị aka. Maka ịkwaga n'ebe ndịda Middle East.
Otu esi achọta ma tinye maka ohere na UAE
Ahịrịokwu ole na ole na-esonụ anyị ga-achọ ikpuchi gị. Na isi ajụjụ banyere esi malite ọrụ na mba Dubai N'ibuli elu ahia, nnukwu ụlọ ọrụ mba ụwa na ọbụna ụlọ ọrụ dị na UAE. Tinyere ebe ego kacha mma. N'afọ ndị sochirinụ, Gọọmentị na UAE. Bido ijikwa atụmatụ maka ịzụlite ụkpụrụ. Ndị ọhụrụ na-achọ ọrụ n'ụwa niile. Karịsịa Ndị ọrụ Pakistani ndị na-ele anya kwaga Dubai. Nwere ike ijikwa visa ngwa ngwa ngwa ngwa. N'akụkụ aka nke ọzọ, ịkwesịrị ịzụlite ụkpụrụ gị.
Ịkwesịrị ịkwadebe ntụrụndụ gị na ọkwa ụlọọrụ. Debe nkọwa zuru ezu nke UAE qualification dị mfe inye. Ọ bụrụ na ị nwere ya ama ọ dị egwu. Jide n'aka na a sụgharịrị asambodo onwe gị site na obodo gị. Ọbụna akwụkwọ ndị ọzọ dị mkpa gafere site na post ma ọ bụ email. Na njikere mgbe nile izipu maka ịbanye na Dubai na Abu Dhabi. Ọ bụ ezie na ọ nwere ike ịbụ ihe doro anya, ma na-azụ ndị ọrụ. Karịsịa ndị ahụ nwere ahụmahụ nlekọta ahụike.
Ị hụla onwe gị, ọtụtụ nlọghachi na ndụ ha niile. Ya mere, echela ruo oge ikpeazụ. Maka Dubai City anaghị ehi ụra ma na-ebuli elu. Tupu i zipụ ya ọzọ wee banye na mmalite gị, gbanwee ma ọ bụ wepu ihe ndị na-adịghị mkpa. Tinyekwu nkọwa nkọwa na nchịkọta ọhụrụ emelitere site na Linkedin dị mma. Ọ dị ezigbo mkpa ịchọta. Otu ụlọ ọrụ anyị nwere ike enyere gi aka iru oru nyocha gi.
Chọta Job na WhatsApp na ụlọ ọrụ Dubai City
Iji gosi gị onye nchọta onye nchọta onye choro a ga-atụkwasịkwa ya na Gịnị bụ App.
Nnweta nchịkọta obodo n'obodo Dubai na 2018-2019
AHỤ NDỊ AHỤRỤ TO DUBAI!
Anyị na na-anata ndị ọpụpụ ọhụrụ na Dubai
WhatsApp mbanye na Dubai City
Anyị ga-enwe mmasị ịnụ n'ọnụ gị. Nanị n'ihi na anyị na-achọ ndị ọpụpụ ọhụrụ ndị na-achọ ịbanye n'òtù anyị. N'okpuru ọnọdụ ndị ahụ, anyị kere a usoro nlekota oru mobile maka ndi choro oru. Ya mere ọ bụrụ na ị hụrụ WhatsApp nchịkọta. Ị nwere ike ịkwalite ọrụ ọrụ gị ugbu a gaa na ndị na-amụrụ anyị na Dubai.
Ihe mbụ ị ga-echeta? tupu ị gawa. biko hapụ okwu dị n'okpuru ebe a. N'iji nkọwa gị, ya mere anyị ga-enwe ike ịkpọtụrụ gị n'ezoghị ọnụ. Anyị bụkwa ego maka Saudi Arabia ụlọ ọrụ. Ya mere, ọ bụ bara uru iji biputere CV emelitere anyị. N'iburu nke a n'uche, ndị ọrụ gọọmentị anyị ga-anwa ịmekọ nkọwa gị.
Kedu ihe ị na-eche banyere nbudata na nbudata WhatsApp Online? Nke kachasị mma bụ na United Arab Emirates. Anyị ka dịkwa ugbu a enyere ụmụ nwanyị na-enwetata ọrụ ịchọta ọrụ na Dubai.
Ụlọ ọrụ obodo Dubai City na-enye ọrụ nchịkọta ọrụ zuru oke na Whatsapp. N'aka nke ọzọ, anyị na-echere ozi si n'aka gị. Onye maara nwere ike anyị nwere ike inyere gị aka ịghọ onye ọpụpụ ọhụrụ na Dubai ma ọ bụ Qatar. N'ikpeazụ, malite ịrụ ọrụ na Emirates.
Nyere ndi ozo aka inweta oru na Dubai
Na nyocha ikpeazụ biko share isiokwu anyị Google maka ọrụ ohere. Anyị nọ ebe a iji nyere ndị ọzọ aka iru ihe mgbaru ọsọ na Linkedin. Anyị na-enwe obi ụtọ mgbe ndị ọbịa ọhụrụ anyị. Na-enye anyị aka na ịkekọrịta ọdịnaya anyị na Facebook ma ọ bụ Linkedin. N'inye ihe ndị a, ị na-enyere ndị ọzọ aka. Na ụzọ kachasị mma bụ ijikọta gị na ndị ọrụ nchịkọta on LinkedIn.
Enwere ohere maka ohere ohere na Dubai. Anyị amaghị onye nwere ike ọbụna ohere ọrụ ego maka gị!. Ya mere, biko nyere anyị aka ka ị nwere ike ịkọrọ anyị isiokwu anyị. N'ihi na inyere ndị ọzọ aka dị mma maka onye ọ bụla. Onye maara ma eleghị anya n'ọdịnihu onye na-enyere gị aka. Ị ga-ahụ ọrụ nrọ na Emirates.
Ịchọrọ ịmalite Na-arụ ọrụ na Emirates dịka Ọhụụ echefula na-agbakwunye nọmba ekwentị gị gaa na WhatsApp Group? Bulite Na-amalite na ngwa ngwa na-eto eto Whatsapp na Middle East !.